ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲစေခဲ့သော အကြောင်းရင်းများ - Thutazone
ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲစေခဲ့သော အကြောင်းရင်းများ
မူရင်းရေးသားသူ – Academy Page
ယူဂိုဆလပ် စစ်ပွဲ ဆိုသည်မှာ ၁၉၉၀နှစ်များအချိန်က ယခင် ယူဂိုဆလပ် နိင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်သည် ။ ထိုအချိန်က ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စုတွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်နယ် ၆ -ခု ပါဝင်သည် ။ ထိုဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်များသည် ( ၁၉၉၁ – ၉၂ ) – ခုနှစ်တွင် ခွဲထွက်ကာ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာရာမှ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ။
ပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ စစ်ပွဲ ၃ -ပွဲ မှာ ၁၉၉၁ မှ ၁၉၉၅ အချိန်အတွင်းဖြစ်ပွားပြီး စတုတ္ထစစ်ပွဲမှာ ၁၉၉၉ – ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ။ သမိုင်းပညာရှင်များမှ ထို စစ်ပွဲ ၄ – ပွဲကို ယူဂိုဆလပ် စစ်ပွဲဟုခေါ်သည် ။ ထိုစစ်ပွဲသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်း၏ ထင်ရှား သည့် စစ်ပွဲများထဲတွင် တခုအပါအဝင်ဖြစ်သည် ။ ထိုစစ်ပွဲပြီးနောက် ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စုကွဲသွားခဲ့ပြီး ဆလိုဗေးနီးယား ၊ ခရိုအေးရှား ၊ ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယား (ယ္ခင် ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စု ) မွန်တီနီဂရိုး ၊ ဆာဗီးယား နှင့် နိင်ငံသစ် ၆ -နိင်ငံ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ။
ဥရောပ အရှေ့တောင်ဖက်ဒေသ သည် ဘီစီ ၃၃၀ – အချိန်က မက်ဆီဒိုးနီးယားဘုရင် Alexander the Great ကြီးစိုးခဲ့ရာဒေသဖြစ်သည် ။ အေဒီ ၄၀၀ – ခန့်မှစ၍ ရောမအင်ပါယာဒေသ ၊ အေဒီ ၁၃၇၁ မှ ၁၉၁၂ အချိန်အထိ အော်တိုမင် အင်ပါယာဒေသဖြစ်ခဲ့သည် ။ ပထမကမ္ဘာစစ်တွင် အော်တိုမင်များ သည် ဂျာမန် များ ဖက်မှဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့ကြသည် ။ ပထမ ကမ္ဘာစစ်တွင် ဂျာမန်များစစ်ရှုံးပြီးနောက် အော်တိုမင် အင်ပါယာ ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်။
ယူဂိုဆလပ်နိုင်ငံမှာ ပထမကမ္ဘာစစ် ( ၁၉၁၄ -၁၈ ) အပြီးပေါ် ထွန်းလာသည့် ဘုရင့်နိင်ငံဖြစ်သည် ။ ယူဂိုဆလပ် ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “land of the South Slavs,” ဟု ဆိုလိုသည် ။ ထိုနိင်ငံအား ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ( ၁၉၃၉ -၄၅ ) အချိန်က ဂျာမန် တို့၏ ဝင်ရိုးတန်း နိင်ငံများအဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည် ။ ဒုတိယကမ ္ဘာစစ်အပြီး နိင်ငံအား ယူဂိုဆလပ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင် Josip Broz Tito မှ ဆိုဗီယက်ပုံစံ ကွန်မြူနစ်စနစ်ဖြင့် ၁၉၄၅ – ခုနှစ်အချိန်မှ စတင်ကာ သူသေဆုံးချိန် ၁၉၈၀ -ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့ သည် ။ ယူဂိုဆလပ်နိုင်ငံသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ၊ ရိုးရာအစဉ်အလာ ပေါင်းစုံ နှင့် ဘာသာ စကား များစွာပြောဆိုကြသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည် ။
၁၉၄၇ -ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စုထဲတွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်နယ် ၆ -ခု ပါဝင်သည် ။ ထိုပြည်နယ်များမှာ – ဆလိုဗေးနီးယား ၊ ခရိုအေးရှား ၊ ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယား ၊ မွန်တီနီဂရိုး ၊ ဆာဗီးယား ၊ တို့ဖြစ်သည် ။ ဘာလင်ဂရက် မြို့မှာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဖြစ်ပြီး ဆာဗီးယား ပြည်နယ်၏မြို့တော်လည်းဖြစ်သည် ။ ထိုပြည်နယ်များတွင် တချို့ပြည်နယ်များမှာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး ၊ တချို့မှာ တပိုင်းတစ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်များ ဖြစ်ကြသည် ။
ပြည်နယ် ၆ – ခုထဲမှာ ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ပြည်နယ်မှာ အဓိက လူမျိုးမရှိဘဲ Serb ၊ ခရိုအေးရှား နှင့် မူဆလင် Slavs လူမျိုးများ ပေါင်းစည်းနေထိုင်ကြသည် ။ ထို့အတူ ဆာဗီးယားပြည်နယ်၏ ကိုဆိုဗိုဒေသ တွင် လည်း အလ်ဘေးနီးယား နှင့် Vojvodina လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည် ။
၁၉၈၀ – ခုနှစ်တွင် Josip Broz Tito သေဆုံးပြီးနောက် နိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း ပြသနာ ပေါ်လာခဲ့သည် ။ Josip Broz Tito နေရာကို ဆက်ခံသူများမှာ လည်း ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်များ၏ နိင်ငံရေးပြသနာကို ပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းနိင်ခဲ့ကြပေ ။ ထိုကဲ့သို့အကြပ်အတည်း ကြုံတွေ့လာသောအခါ နိုင်ရေးသမားများသည် ပြည်နယ်တစ်ခုမှ တစ်ခုအား အပြစ်တင်လာခဲ့ကြသည် ။
၁၉၈၉ -ခုနှစ်တွင် ဆာဗီးယားကွန်မြူနစ်ပါတီ ဥက္ကဌ Slobodan Milošević ( မီလိုဆီဗစ် ) ဆာဗီးယားပြည်နယ် သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည် ။ ထို့နောက်သူသည် ယူဂိုဆလပ် ဗဟိုအစိုးရ တွင် Serb လူမျိုးများ ကြီးစိုးရေးကို လုပ်ဆောင် လာခဲ့သည် ။ Vojvodina ၊ မွန်တီနီဂရိုးဒေသ မှ အစိုးရ နှင့် ပါတီခေါင်းဆောင်များကို ထိန်းချုပ် လာခဲ့သည် ။ ကိုဆိုဗို နှင့် Vojvodina ဒေသမှ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နယ်များကို ကန့်သတ်လာခဲ့သည် ။ ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယား ဒေသမှ Serb သူပုန်ထကြွမှုများကို အကူအညီပေးလာခဲ့သည် ။
၁၉၉၀ – အချိန် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲမှု နှင့်အတူ အရှေ့ဥရောပဒေသ တွင် ကွန်မြူနစ်စနစ် ယိမ်းယိုင်လာခဲ့သည် ။ ယူဂိုဆလပ် နိုင်ငံတွင်လည်း ပြည်သူများ၏ တွန်းအားကြောင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် ၆ -ခုလုံးတွင် ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် သဘောတူခဲ့ကြရသည် ။
ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသောအခါ ပြည်နယ်တိုင်း ပြည်နယ်တိုင်းတွင် အနိုင်ရပါတီများမှာ လူမျိုးကို အခြေခံထားသည့် အမျိုးသားရေးပါတီ များဖြစ်လာခဲ့သည် ။ ထိုအခါ ယူဂိုဆလပ် ဗဟိုအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေးတွင် ရှုပ်ထွေးလာခဲ့ကာ ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်များ ခွဲထွက်ရာမှ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာခဲ့သည် ။ နောက်ဆုံး ၁၉၉၁ – ခုနှစ်တွင် ဆလိုဗေးနီးယား ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယား နှင့် ခရိုအေးရှားတို့မှ လည်ကောင်း ၊ ၁၉၉၂ – ခုနှစ်တွင် ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုဗီးယား တို့မှ လည်ကောင်း လွတ်လပ်ရေးကြေငြာကာ ခွဲထွက်သွားခဲ့သည် ။
၁၉၉၇ – ခုနှစ်တွင်( မီလိုဆီဗစ် ) မှာ ယူဂိုဆလပ်ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ – ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင် လူထု ဆန္ဒပြပွဲကြောင့် ရာထူးမှဖြုတ်ချခံခဲ့ရသည် ။ ၂၀၀၁ – ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ၏ ဖိအားများကြောင့် ( မီလိုဆဗစ် ) အားဖမ်းဆီးပြီး တရားရင်ဆိုင် စေခဲ့သည် ။ ကျန်သည့် ဆာဗီးယား နှင့် မွန်တီနီဂရိုးတို့မှ Federal Republic of Yugoslavia (FRY) အဖြစ် ၂၀၀၃ – ခုနှစ်တွင် တဖန် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် ။ ၂၀၀၆ – ခုနှစ်တွင် ထိုနှစ်နိင်ငံ မှာလည်း ကွဲထွက်သွားခဲ့ပြီး ဆာဗီးယားနိုင်ငံ နှင့် မွန်တီနီဂရိုး နိင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည် ။
ပထမ စစ်ပွဲ မှာ ၁၉၉၁ – ဇွန်လ နှင့် ဇူလိုင်လ အချိန်က ဆလိုဗေးနီးယားဒေသ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆလိုဘေးနီးယား စစ်ပွဲ ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ စစ်ပွဲ မှာ ခရိုအေးရှားဒေသ တွင် ၁၉၉၁ -ဒီဇင်ဘာလ နှင့် ၁၉၉၅ – ခုနှစ် နွေရာသီ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ခရိုအေးရှားစစ်ပွဲ ဖြစ်သည်။
တတိယ စစ်ပွဲမှာ ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားဒေသတွင် ၁၉၉၂ မှ ၁၉၉၅ – ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားစစ်ပွဲ ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ နှင့် တတိယစစ်ပွဲ တွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့ပြီး အရပ်သားအများစု အပါအဝင် လူဦးရေ သိန်းချီသေဆုံးခဲ့ကာ ၊ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၂.၅ -သန်း အထိ အခြားဒေသများသို့ထွက်ပြေးခိုလှုံ ခဲ့ကြရသည် ။ စတုတ္ထစစ်ပွဲကို ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲဟုခေါ်ပြီး ၁၉၉၉ – မတ်လမှ ဇွန်လအထိ ကြာမြင့်ခဲ့သည် ။
၁၉၉၁ – ဇွန်လ ၂၅ တွင် ဆလိုဗေးနီးယား ဒေသ မှ လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာကာ ခွဲထွက်သွားခဲ့သည် ။ နောက် ၂ – ရက်အကြာတွင် ယူဂိုဆလားဗီးယား ဖက်ဒရယ်အစိုးရမှ စစ်တပ်စေလွှတ်ပြီး ယူဂိုဆလပ် နယ်နမိတ် အား ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးစားခဲ့ သည် ။ သို့သော်လည်း စွမ်းရည်ပြည့်ဝသည့် ဆလိုဗေးနီးယား စစ်သည်များမှ ယူဂိုဆလပ် စစ်တပ်ကို မောင်းထုတ် နိင်ခဲ့ ကြသည် ။ ထိုစစ်ပွဲသည် ၁၀ -ရက်ခန့်သာ ကြာမြင့်ခဲ့သည် ။
၁၉၉၁ – ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းမှာပင် ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စုမှ ဆလိုဗေးနီးယား နိင်ငံခွဲထွက်သွားခဲ့သည် ။ ၁၉၉၂ – ဇွန်နဝါရီလ အချိန်တွင် ဆလိုဗေးနီးယားနိင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအား ဥရောပသမဂ္ဂမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပြီး မကြာမီမှာပင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် ။
ခရိုအေးရှားဒေသ သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အချိန်က puppet state ( ရုပ်သေးအစိုးရအုပ်ချုပ်) သည့် ပြည်နယ် ဖြစ်ပြီး ဂျာမနီ၏ မဟာမိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့သည် ။ ဒုတိယကမ ္ဘာစစ်အချိန်က Ustaše ဥိးဆောင်သည့် ခရိုအေးရှားစစ်တပ်ကြောင့် Serbs လူမျိုး သိန်းချီသေ ဆုံးခဲ့ဖူးသည် ။
ခရိုအေးရှားပြသနာ မှာ ၁၉၉၀ – အချိန်မှ စတင်ခဲ့သည် ။ ၁၉၉၀ – မေလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် Croatian Democratic Union ပါတီမှ အနိင်ရရှိခဲ့သည် ။ ၁၉၉၁ – ဇွန်လ အချိန်တွင် ခရိုအေးရှားပါလီမန်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် နှင့်အတူ ခရိုအေးရှားလွတ်လပ်ရေး ကြေငြာခဲ့ကြသည် ။ ၁၉၉၁ -နိုဝင်ဘာလ တွင် ခရိုအေးရှား၏လွတ်လပ်ရေးအား အမေရိကန် နှင့် ဥရောပနိင်ငံများမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည် ။ သို့သော်လည်း ခရိုအေးရှား၏ Krajina’s ဒေသ တွင် နေထိုင်ကြသည့် Serb များသည် ခရိုအေးရှားမှခွဲထွက်ကာ ဆာဗီးယား နှင့်ပူးပေါင်းလိုကြသည် ။ ထိုအခါ ယူဂိုဆလားဗီးယားစစ်တပ်မှ Krajina’s ဒေသရှိ Serb များ ကို ဝင်ရောက်ကူညီရာမှ ခရိုအေးရှား စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာခဲ့ရသည် ။
ကုလသမဂ္ဂ နှင့် နိင်ငံတကာမှ ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးမှု နှင့်အတူ ၁၉၉၂ – ဇွန်နဝါရီလ တွင် စစ်ပွဲကို ရပ်ဆိုင်းနိင်ခဲ့ပြီး ယူဂိုဆလပ် စစ်တပ်မှ ဆုတ်ခွာပေးခဲ့သည် ။ ထိုနေရာတွင် ကုလငြိမ်းချမ်းရေးတပ် ၁၄၀၀၀ -ကို ချထားပြီး တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြသည် ။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၅ – ခုနှစ်မေလ တွင် တဖန် ခရိုအေးရှားတပ်များသည် Krajina ဒေသ ရှိ Serbs များကို မောင်းထုတ်ခဲ့သဖြင့် စစ်ပွဲတဖန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်သည် ။ နိုင်ငံတကာ၏ ဝင်ရောက်ဖြန်ဖြေမှုကြောင့် စစ်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့သော်လဲ Krajina ဒေသ မှ Serbs လူမျိုးအများအပြားသည် တခြားဒေသ သို့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေး သွားခဲ့ကြသည် ။ ဤစစ်ပွဲကို သမိုင်းတွင် လူမျိုးတုံးသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုစစ်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြသည် ။
ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားစစ်ပွဲ
ဤဒေသ ကိုအများအားဖြင့် ဘော့စနီးယားဟုခေါ ကြသည် ။ တချိန်က Serbs နှင့် ခရိုအေးရှား လူမျိုးများစု အများဆုံး နေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည် ။ ၁၉၉၀ – အချိန်တွင် ဘော့စနီးယားဒေသ၌ ( Bosniaks ) ခေါ်မူဆလင် Slavs လူမျိုး ၄၄% ( ၄.၄ – သန်း ) ၊ Serbs လူမျိုး ၃၁ % ၊ ခရိုအေးရှားလူမျိုး ၁၇% ခန့်အထိရှိလာခဲ့သည် ။
၁၉၉၀ – တွင် ဘော့စနီးယား ဒေသ ၌ ပါတီစုံ ရွေး ကောက်ပွဲ စတင် ကျင်းပရာ မူဆလင် Slavs လူမျိုး များကြီးစိုးသည့် PDA ပါတီမှ အနိင်ရရှိခဲ့သည် ။ ၁၉၉၁ – အချိန်တွင် ခရိုအေးရှား နှင့် ဆလိုဗေးနီးယားတို့ လွတ်လပ်ရေး ရရှိလာသောအခါ ဘော့စနီးယား မှလည်း ခွဲထွက်ရန်ကြိုးစားလာခဲ့သည် ။ ၁၉၉၁ – မတ်လ အချိန်တွင် ဘော့စနီးယား ပါလီမန်၌ ယူဂိုဆလားဗီးယားမှ ခွဲထွက်ရေး မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကြေငြာခဲ့ကြသည် ။ သို့သော်လည်း ထိုကြေငြာချက်ကို Serbs လူမျိုး နှင့် ခရိုအေးရှားလူမျိုး များ ပေါင်းစည်းထားသည့် SDA ပါတီမှ သပိတ်မှောက် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည် ။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘောစနီးယားဒေသ တွင် ပဋိပက္ခ စတင်လာခဲ့သည် ။
၁၉၉၂ – ခုနှစ်ဧပြီလ အချိန်တွင် မေရိကန် နှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂမှ ဘော့စနီးယားလွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်သောအခါ ပြသနာမှာ ပို၍ရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည် ။ ထိုအခါ ယူဂိုဆလပ် စစ်တပ်မှ ဘော့စနီးယားနယ်မြေထဲသို့ Serb တပ်ဖွဲ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည် ။ Serb စစ်တပ်မှ မူဆလင်ကျေးရွာများကို ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးရာမှ အစုလိုက်သတ်ဖြတ်မှုများပေါ်ပေါက် လာခဲ့သည် ။ ထိုအခါ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကုလငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးတပ်သား ၇၀၀၀ -ကို ဘော့စနီးယား သို့ စေလွှတ်ခဲ့ရသည် ။
၁၉၉၃ – အချိန်တွင် ခရိုအေးရှားတပ်များမှလည်း ဘော့စနီးယားအလယ်ပိုင်း မူဆလင် ကျေးရွာများကို ထိန်းချုပ်လာခဲ့သည် ။ ၁၉၉၄ – အချိန်တွင် ကုလငြိမ်းချမ်းမှုတပ်အင်အားမှာလည်း ၂၄၀၀၀ – အထိရှိလာခဲ့သည် ။ နိုင်ငံတကာမှ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဝင်ရောက် ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လဲ ဘောစနီးယားရှိ လူမျိုးစု ၃ – စု ၏ ပြသနာမှာ ၁၉၉၅ – အချိန် အထိ ပြီးဆုံးခြင်းမရှိခဲ့ပေ ။
၁၉၉၅ – မေလ အချိန်တွင် Serb တပ်များမှ ဆာရာဂျေဗိုမြို့ကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ပြန်ရာနေတိုးတပ်ဖွဲ့မှ Serb တပ်စခန်းကိုပြန်လည်ဗုံးကြဲခဲ့ကြသည် ။ အချိန် ၃ -ပတ်ကြာမျှ ဆွေးနွေးပြီးနောက် ၊ ၁၉၉၅ – နိုဝင်ဘာလတွင် ဘော့စနီးယားအစိုးရ နှင့် Serb စစ်တပ် တို့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့ကြသည် ။ သို့သော်လည်း ကုလငြိမ်းချမ်းရေးတပ်အင်အား ၆၀၀၀၀ – အထိ ထားရှိကာ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ရသည် ။ ဘောစနီးယားစစ်ပွဲ ၃ – နှစ်တာ အချိန်အတွင်း လူ ၁ – သိန်းခန့်သေ ဆုံး လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြပြီး လူမျိုးစု တစု နှင့်တစုအကြား လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု အဖြစ် သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် စစ်ပွဲတပွဲဖြစ်သည် ။
ကိုဆိုဗိုဒေသ သည် ဆာဗီးယားပြည်နယ် အနောက်တောင်ဖက်တွင် တည်ရှိသည် ။ တချိန်က Serbs လူမျိုးအများစုနေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ၂၀ – ရာစုအချိန်တွင်အများစု ၈၀% ခန့်မှာ အလ်ဘေးနီးယား လူမျိုးများဖြစ်ကြသည် ။
ကိုဆိုဗိုဒေသ မှ အလ်ဘေးနီးယား လူမျိုးတချို့သည် ယူဂိုဆလပ် နိင်ငံ ထူထောင်ချိန်မှစ၍ ဆာဗီးယားပြည်နယ်တွင် ပုံကန် နေခဲ့ကြသည် ။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆာဗီးယားဒေသမှခွဲထွက်ပြီး အနီးရှိ အလ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ နှင့် ပူးပေါင်းလိုခြင်းဖြစ်သည် ။ ၁၉၆၈ – အချိန်မှစ၍ ယူဂိုဆလပ် ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင် Tito မှ ကိုဆိုဗိုဒေသ ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးခဲ့ကာ နောင်တွင် ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယားပြည်နယ်အဖြစ် ခွဲထွက် ရပ်တည်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည် ။
Tito သေဆုံးပြီးနောက် ၁၉၈၁ – ခုနှစ်တွင် ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယား တို့သည် ယူဂိုဆလပ်နိင်ငံတွင် သီးခြားလွတ်လပ်သည့် ပြည်နယ်တောင်းဆိုလာကြသည် ။ ၁၉၈၉ – ခုနှစ်တွင် ဆာဗီးယားတွင် Miloševic အာဏာရရှိလာသောအခါ ကိုဆိုဗိုပြသနာမှာပို၍ ရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည် ။ Serbs လူမျိုးများ နှင့် ( မီလိုဆဗစ် ) တို့မှ ကိုဆိုဗိုလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို မနှစ်သက်ကြပေ ။ နောက်ပိုင်း ကိုဆိုဗိုဒေသ ၊ အလ်ဘေးနီးယား လူမျိုး မြေအောက်လှုပ်ရှားသူများ မှ ကိုဆိုဗို လွတ်မြောက်ရေး စစ်တပ် (KLA ) ကို ဖွဲ့စည်းကာ တောင်ကုန်းဒေသတွင် တပ်စွဲ လာခဲ့ကြသည် ။ ၁၉၉၇ – ၉၈ -ခုနှစ်တွင် (KLA ) တပ်ဖွဲ့များမှ ဆာဗီးယားရဲစခန်းများကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် လာခဲ့ကြသည် ။
၁၉၉၈ – မတ်လတွင် ယူဂိုဆလပ် စစ်တပ်သည် ဆာဗီးယားရဲ တပ်ဖွဲ့များ နှင့်ပူးပေါင်းကာ KLA တပ်ဖွဲ့ များ သာမက သူတို့နှင့် ပူးပေါင်းသူများ အားလဲ ချေမှုန်းခဲ့ရာ လူရာပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရသည် ။ ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယား ၂ -သိန်းခန့်မှာ နေအိမ်များမှ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည် ။ ထိုမောင်းထုတ်ခံရသည့်သူများမှာလည်း KLA တပ်ဖွဲ့များ နှင့်ပူးပေါင်းကာ ယူဂိုဆလပ် စစ်တပ်ကို တန်ပြန်ခုခံရာမှ ပြသနာပိုမိုကြီးထွားလာခဲ့သည် ။ သာမန်အရပ်သားများမှာလည်း လူမျိုးရေးကို အကြောင်း ပြုကာ ဓါးစာခံဖြစ်လာခဲ့သည် ။
နောက်ဆုံးတွင် စစ်ပွဲထဲသို့နေတိုးတပ်ဖွဲ့မှ ပါဝင်လာခဲ့သည် ။ ၁၉၉၈ – အောက်တိုဘာလတွင် နေတိုးတပ်ဖွဲ့မှ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ပြီး ယူဂိုဆလပ် တပ်များအား ဆုတ်ခွာစေကာ ( မီလိုဆဗစ် ) အား ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယား ခေါင်းဆောင်များ နှင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်စေခဲ့သည် ။ သို့သော်လည်း KLA တပ်များသည် အင်အားပြန်စုကာ ဆာဗီယားတပ်များကို ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ရာ ဆာဗီးယားတပ်များသည် အလ်ဘေးနီးယားကျေးရွာများကို ခံတပ်လုပ်ပြီး အရပ်သားများကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည် ။
ကိုဆိုဗိုဒေသ တွင် အလ်ဘေးနီးယားလူမျိုး ၁.၅ သန်းခန့် သေဆုံးခဲ့လိမ့်မည်ဟု နိင်ငံတကာမှခန့် မှန်းခဲ့ကြသည် ။ ၁၉၉၉ – ဖေဖေါ်ဝါရီ နှင့် မတ် လတွင် ပြင်သစ်နိင်ငံ၌ ( မီလိုဆဗစ် ) အစိုးရ နှင့် KLA ခေါင်းဆောင်များ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ ။ နောက်ဆုံး နေတိုးအဖွဲ့၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု နှင့်အတူ မြေပြင်တပ်များ ကိုဆိုဗိုသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည် ။
၁၉၉၉ -ဇွန်လတွင် ( မီလိုဆဗစ် ) မှ ငြိမ်းချမ်းရေး အစီအမံကို လက်ခံခဲ့သော်လည်း ကိုဆိုဗိုဒေသ အား ယခင်ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စုထဲတွင် ထားရှိကာ နေတိုး နှင့် ကုလသမဂ္ဂ မှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည် ။ ထို့နောက်နေတိုးတပ်ဖွဲ့မှဆုတ်ခွာကာ ကုလငြိမ်းချမ်းရေးတပ်များကို ချထားခဲ့ကြသည် ။ ကုလငြိမ်းချမ်ရေးတပ်များချထားစဉ်မှာပင် KLA တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် ကိုဆိုဗိုဒေသတွင်ကျန်ရှိနေသည့် Serbs လူမျိုးများ ၊ ရော်မန်များ ၊ မူဆလင် Slavs နှင့် တာကီ များ စသည့် အလ်ဘေးနီးယား လူမျိုးမဟုတ်သည့်သူများကို ပြန်လည်မောင်းထုတ်ရာမှ ဒုတိယ အကြိမ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်သည် ။
၂၀၀၀ -ခုနှစ်အောက်တိုဘာတွင် ကုလသမဂ္ဂမှဦးဆောင်ပြီး ကိုဆိုဗိုဒေသ တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ရာ အလ်ဘေးနီးယား လူမျိုးကြီးစိုးသည့်ပါတီမှ အနိင်ရရှိခဲ့သည် ။ ၂၀၀၅ – ခုနှစ်တွင် ကိုဆိုဗိုဒေသမှ ကုလငြိမ်းချမ်းရေးတပ်အား အင်အား ၅ -သိန်းမှ ၁၇၀၀၀ အထိလျော့ချခဲ့ကြသည် ။ ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲပြီးနောက် ၂၀၀၆ -ခုနှစ်တွင် ယူဂိုဆလပ် ပြည်ထောင်စုမှ ဆာဗီးယားနိင်ငံ နှင့် မွန်တီနီဂရိုး နိင်ငံဟု နှစ်နိင်ငံကွဲကွာသွားခဲ့သည် ။ သို့သော်လည်း ကိုဆိုဗို ဒေသ မှာ မည်သည့်အချိန်တွင် ဆာဗီးယား ( သို့ ) ယူဂိုဆလားဗီယား နိင်ငံ မှ ခွဲထွက်မည် ( သို့ ) ပူးပေါင်းမည်ကို မဆုံးဖြတ်သေးဟု ဆိုသည် ။
စစ်ပွဲကြောင့် ယူဂိုဆလပ်ဗီးယားပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲခဲ့ရပြီး လွတ်လပ်သည့် နိင်ငံ ၆ -နိင်ငံပေါ်ထွက် လာခဲ့သည် ။ ၎င်းတို့မှာ ဆလိုဗေးနီးယား ၊ ခရိုအေးရှား ၊ မက်ဆီဒိုးနီးယား ( ယ္ခင်ယူဂိုဆလပ်ဗီးယား ) ၊ ဘောစနီးယား နှင့် ဟာဇီကိုဗီးနား ၊ ဆာဗီးယား ၊ မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ တို့ ဖြစ်ကြသည် ။ ထို့အတူ ဆာဗီးယား၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် ကိုဆိုဗိုဒေသ မှာ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်မှ စောင့်ရှောက်သည့် ဒေသဖြစ်လာခဲ့သည် ။
အထူးသဖြင့် ခရိုအေးရှား ဒေသ နှင့် ဘော့စနီးယားဒေသ တွင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ နေရပ်စွန့်ခွာသူအနည်းငယ်မျှ သာပြန်လာခဲ့ကြသည် ။ ဆလိုဗေးနီးယား ဒေသမှလွဲ၍ ကျန်ဒေသ များတွင် စစ်ပွဲကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများပြားခဲ့ပြီး စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေးကြောင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ အချိန်များစွာကြာမြင့်ခဲ့ရသည် ။ ကိုဆိုဗို ဒေသ နှင့် ဘော့စနီးယားဒေသများတွင် ဖြေရှင်းမရသည့်ပြသနာများစွာ ကျန်ရှိနေခဲ့ကာ နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ အသစ်များ ပေါ်ပါက်လာခဲ့သည် ။
၁၉၉၉ – အချိန် ရောက်မှ ခရိုအေးရှားဒေသ တွင် လူမျိုးရေးကို အခြေခံသည့်နိင်ငံရေးမှ ဒီမိုကရက်ကို အခြေခံသည့် နိင်ငံရေးစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည် ။ ယူဂိုဆလပ် စစ်ခေါင်းဆောင်များသည် စစ်ပွဲအတွင်း စစ်ရာဇဝပ်မှု များစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြသည် ။ ကုလသမဂ္ဂ လုံချုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ ၁၉၉၈ – ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စစ်ရာဇဝါတ်ခုံရုံး (ICC) အား နယ်သာလန်နိင်ငံ Hague မြို့တွင် ထူထောင်ခဲ့ကြသည် ။
၂၀၀၂ – ခုနှစ်တွင် ယခင် ဆာဗီးယားသမ္မတဟောင်း ( မီလိုဆဗစ် ) အား စစ်ရာဇဝတ်မှု ဖြင့်ခုံရုံးတင် စစ်ဆေးခဲ့ကြသည် ။ ၂၀၀၆ – ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုကြောင့် ( မီလိုဆဗစ် ) ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးနောက် စစ်ခုံရုံးတရားစီရင်မှုမှာလည်း ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရသည် ။
Tags: countriesmilitaryworld historyworld knowledge
လင်းပိုင် နဲ့ လင်းရှူး ဘာကွာသလဲ
လင်းပိုင်(Dolphin) တွေကိုတော့ စာတွေ ပုံတွေထဲမှာ မကြာခဏ ဖတ်ဖူး မြင်ဖူးကြတဲ့အတွက် တော်တော်များများ သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ လင်းရှူး(Porpoise) တွေကိုတော့ နာမည်သာ ကြားဖူးကြပြီး သိတဲ့သူ နည်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ လင်းပိုင် နဲ့...
ဟိုချီမင်းမြို့ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဟိုချီမင်းမြို့ဟာ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ် ရဲ့ အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီး နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေအများဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဂုံမြစ်အနီးမှာ တည်ရှိပြီး သမိုင်းထဲမှာတော့ ဆိုင်ဂုံ ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်မြို့တော်ဟောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုချီမင်းမြို့ဟာ ဗီယက်နမ်ရဲ့ စီးပွားရေး...
လင်းယုန် နဲ့ သိမ်းငှက် ဘာကွာသလဲ
အမဲလိုက်ငှက်အမျိုးအစားတွေဖြစ်ကြတဲ့ လင်းယုန်(eagle) နဲ့ သိမ်းငှက်(hawk) တို့ဟာ အက်ကဆစ်ပစ်ထရီဒီ မျိုးရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လင်းယုန်အမျိုးအစား ၆၀ ကျော်ရှိပြီး သိမ်းငှက်အမျိုးအစားကတော့ ၂၅၀ ကျော်အထိ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လင်းယုန် နဲ့ သိမ်းငှက်တွေဟာ...
ကမ္ဘာပေါ်က ဝန်ထမ်းအများဆုံး ကုမ္ပဏီကြီး ၅ ခု
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဝန်ထမ်းဦးရေအလိုက် အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီကြီးတွေ စာရင်းမှာတော့ အမေရိကန် ၊ တရုတ် ၊ ထိုင်ဝမ် ၊ ဂျာမနီ နဲ့ ယူကေ နိုင်ငံတွေက ကုမ္ပဏီတွေက ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအများစုကတော့ လက်လီစတိုးဆိုင် ၊...
Categories Select Category Amazing Buddhism Feeling Health History Knowledge motivation news None People Places Science & Tech Successful Thinking To Know
© 2019. Thutazone.